China 310s ashisayo ipuleti insimbi engagqwali Ukwakha futhi Factory | I-Huaxiao
Insimbi engagqwali engu-310 inokuqukethwe kwekhabhoni okuthe xaxa okungu-0.25%, kuyilapho insimbi engagqwali engu-310S inokuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.08%, kanti ezinye izingxenye zamakhemikhali ziyefana. Ngakho-ke, amandla nobulukhuni bensimbi engagqwali engama-310 kuphakeme futhi ukumelana nokugqwala kubi kakhulu. Ukumelana nokugqwala kwensimbi engagqwali engu-310S kungcono futhi amandla aphansi kancane. Insimbi engagqwali engama-310S kunzima ukuyincibilikisa ngenxa yokuqukethwe kwekhabhoni ephansi, ngakho-ke intengo iphakeme kakhulu.
Amandla we-Sino Stainless Steel mayelana Ama-310 ashisayo insimbi engenasici egoqiwe ipuleti, ama-310s HRP, PMP
Ububanzi: I-600mm - 3300mm, imikhiqizo encishisiwe pls hlola kumikhiqizo ye-strip
Pallet isisindo: 1.0MT - 10MT
Qeda: NO.1, 1D, 2D, # 1, eshisayo iphuma iphelile, emnyama, i-Anneal ne-pickling, ukuphela kwesigayo
310 / 310s Ibanga elifanayo kusuka ezingeni elihlukile
1.4841 S31000 SUS310S 1.4845 S31008 S31008S 06Cr25Ni20 0Cr25Ni20 izinga lokushisa eliphakeme
S31008 Chemical ingxenye ASTM A240:
C: ≤ 0.08, Si: -1.5 Mn: ≤ 2.0, Cr: 16.00～18.00, Ni: 10.0～14.00, S: .00.03, P: ≤0.0I-45 Mo: 2.0-3.0, N≤0.1
S31008 impahla mechanical ASTM A240:
Umehluko ufingqiwe ngale ndlela elandelayo:
1. Ukwakheka kwamakhemikhali kungu-310. Okuqukethwe yikhabhoni kungu-0.15% kanti imfuneko engama-310S ingu-0.08%. Ngaphezu kwalokho, futhi udinga ukuthi ingxenye ye-MO ibe ngaphansi noma ilingane no-0.75%.
2.Ukuqina kobuso ngokwamandla. 310 mkhulu kuno-310S
3. Ukumelana nokugqwala okungu-310S kukhulu kuno-310 ngoba ama-310S engeza i-MO
4. Ukumelana nokushisa okuphezulu okungu-310S kwezimo ezifanayo zokucubungula kungcono kune-310
Okunye okuhluke kakhulu phakathi kwensimbi engagqwali egoqiwe eshisayo nebandayo
Ngokwencazelo, ama-ingots wensimbi noma ama-billets kunzima ukukhubazeka ekushiseni okujwayelekile futhi kunzima ukucubungula. Ngokuvamile, zivutha ku-1100 kuya ku-1250 ° C ngokugoqa. Le nqubo rolling ibizwa rolling hot. Izinsimbi eziningi zisongwa ngokugingqika okushisayo. Kodwa-ke, ngoba ubuso bensimbi buthambekele esikalini se-iron oxide emazingeni aphezulu okushisa, ingaphezulu lensimbi eshubile limbi futhi usayizi wehla kakhulu. Ngakho-ke, kuyadingeka insimbi enobuso obushelelezi, usayizi onembile nezakhiwo ezinhle zomshini, futhi kusetshenziswa izinto eziqediwe ezishisayo noma imikhiqizo eqediwe njengezinto zokusetshenziswa bese kubanda. Ukukhiqizwa kwendlela ye-Rolling.
Ukugingqika ekushiseni okujwayelekile kuvame ukuqondwa njengokugodola okubandayo. Ngokombono we-metallographic, umkhawulo wokugoqa okubandayo nokugingqika okushisayo kufanele kuhlukaniswe ngamazinga okushisa asetshenzisiwe kabusha. Okusho ukuthi, ukugoqa okuphansi kunamazinga okushisa we-recrystallization ukugoqa okubandayo, futhi ukugoqa okuphezulu kunamazinga okushisa we-recrystallization ukugoqa okushisayo. Insimbi inokushisa okuvuselelwa kabusha okungu-450 kuye ku-600 ° C.
Ukugoqa okushisayo, njengoba igama liphakamisa, kunokushisa okuphezulu kocezu olugoqiwe, ngakho-ke ukumelana ne-deformation kuncane futhi inani elikhulu lokuguqulwa lingatholakala. Ukuthatha kweqa ishidi lensimbi njengesibonelo, ubukhulu bokusakaza okuqhubekayo kungenalutho ngokuvamile cishe kungu-230 mm, futhi ngemuva kokugingqika okunzima nokuqeda ukugoqa, ubukhulu bokugcina buyi-1 kuye ku-20 mm. Ngasikhathi sinye, ngenxa yesilinganiso esincanyana sobubanzi-kuya-ukushuba kwepuleti lensimbi, imfuneko yokunemba ntathu iphansi kakhulu, futhi inkinga yomumo akulula ukwenzeka, futhi ukucinana kulawulwa kakhulu. Okwezidingo zenhlangano, kuvame ukutholwa ngokugudluza okulawulwayo nokulawulwa okupholile, okungukuthi, ukulawula ukushisa okuginqikayo, ukuqeda izinga lokushisa lokushisa kanye namazinga okushisa we-crimping wokuqedela ukugoqa ukulawula ukwakheka kwezinto ezincane nezakhiwo zomugqa.
Ukugoqa okubandayo, ngokuvamile akukho nqubo yokushisa ngaphambi kokugoqa. Kodwa-ke, ngenxa yokushuba okuncane kwesiqeshana, ukuma kwepuleti kuthanda ukwenzeka. Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokugoqa okubandayo, kungumkhiqizo ophelile, ngakho-ke, ukuze ulawule ukunemba kobukhulu kanye nekhwalithi yendawo yomugqa, kusetshenziswa izinqubo eziningi eziyinkimbinkimbi. Ulayini obandayo wokukhiqiza umugqa mude, imishini iningi, futhi inqubo iyinkimbinkimbi. Njengoba izidingo zomsebenzisi zokunemba ntathu, ukwakheka nekhwalithi yendawo yomugqa ziyathuthukiswa, imodeli yokulawula, amasistimu we-L1 ne-L2, nezindlela zokulawula ukwakheka kwesigayo esigoqayo esibandayo kuyashisa. Ngaphezu kwalokho, ukushisa kwamaroll and strip kungenye yezinkomba zokulawula ezibaluleke kakhulu.
Umkhiqizo ogoqiwe obandayo neshidi lomkhiqizo eligoqiwe elishisayo lihlukile kunqubo eyedlule nenqubo elandelayo. Umkhiqizo ogoqiwe oshisayo uyimpahla eluhlaza yomkhiqizo ogoqiwe obandayo, futhi ikhoyili yensimbi egoqwe ebandayo eshisiwe yenziwa ngomshini wokukhetha. Izigayo zokugoqa, ukugoqa, zakhiwe ngamakhaza, ikakhulukazi ukugoqa amashidi ashubile ashubile abe amashidi ashubile abanda, imvamisa engu-0.3-0.7mm ngokugoqa okushisayo ebhodini kwe-3.0mm. Ikhoyili egoqiwe ebandayo, umgomo oyinhloko ukusebenzisa isimiso se-extrusion ukuphoqa ukusonteka
Langaphambilini Ipuleti lensimbi engagqwali eligoqiwe elingu-309
Olandelayo: 316L 316 Hot iphuma insimbi engagqwali ipuleti
Ipuleti Lensimbi Engagqwali Eligoqiwe Elishisayo